मलेसियामा जनवरी १ देखी यस्ता ब्यक्तिहरु जान पाउने ? - jagritikhabar.com
मलेसियामा जनवरी १ देखी यस्ता ब्यक्तिहरु जान पाउने ?
मलेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि जनवरी १ देखि बोर्डर खुला गर्ने भएको छ ।
पर्यटक क्षेत्र एकदमै सुस्ताएको भन्दै यसलाई अघि बढाउन मलेसियाले विभिन्न मापदण्डसहित पर्यटकका लागि खुला गर्न लागिएको खबरमा उल्लेख छ ।
कोरोना सङ्क्र-मण दर घट्दै जाँदा खाडीका देशहरूले पनि कोरोना सङ्क्र-मण रोकथामका लागि लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदै लगेका छन् ।
कोरोना स-ङ्क्रमण रोकथामका लागि लगाएको प्र-तिबन्ध खुकुलो बनाउँदै मलेसियाले १ जनवरी २०२२ देखि विदेशी पर्यटकका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर खुला गर्ने खबर द स्टारले लेखेको छ ।
म+हामारीपछि पर्यटकका लागि मलेसियाले आफ्नो बोर्डर खुला गर्ने निर्णय गरे पनि विदेशी कामदार लिनेबारे भने मलेसियाले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
नेपाली श्रमिकलाई नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमार्फत इजरायल लैजाने तयारी
आगामी साताबाट इजरायल जाने नेपाली श्रमिकलाई नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट लैजानेबारे छलफल शुरु भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हेनान गोदरबीच सोमबार भएको भेटवार्तामा यस्तो छलफल भएको हो ।
पर्यटनमन्त्री आलेको सचिवालयका अनुसार भेटका क्रममा आगामी दुई साताभित्र कम्तिमा एक हजार नेपाली श्रमिक इजरायल जाने भन्दै त्यसका लागि नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज भाडामा लिनेबारे छलफल भएको हो । भेटको क्रममा राजदूत गोदरले यस्तो इच्छा व्यक्त गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
इजरायल–भैरहवा उडानको प्रस्ताव
भेटमा राजदूत गोदरले इजरायल–भैरहवा सिधा हवाई उडान गर्न इजरायल सरकार इच्छुक रहेको समेत जानकारी गराएको सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटवार्तामा राजदूत गोदरले इजरायल र काठमाडौं बीच सिधा हवाई उडानका लागि इजरायल सरकारले पहल गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् । राजदूत गोदरले नेपालको आन्तरिक हवाई उडानमा विदेशी र नेपालीको असमान हवाई भाडादरका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री आलेले नेपाल र इजरायल बीच सिधा हवाई सम्पर्कका लागि आफूहरु तयार रहेको जानकारी राजदूत गोदरलाई गराएका थिए ।
भेटमा नेपालको आन्तरिक हवाई उडानमा विदेशी र नेपाली बीच रहेको असमान हवाई भाडादरका विषयमा समेत कुराकानी भएको छ । सो क्रममा मन्त्री आलेले भाडा घटाउन पहल गर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री आलेले नेपालको विविध क्षेत्रमा इजरायले गर्दै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत सहयोगले निरन्तरता पाउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
राजदूत गोदरले ड्राइभ इन सिनेमा (गाडीमा बसी ५० वटा ठूलो पर्दामा फिलिम हेर्न मिल्ने प्रविधि) नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरी ५० मिनेट लामो इजरायली फिल्म हेर्न मन्त्री आलेलाई निमन्त्रण समेत गरेका छन् ।